विदेशमा भन्दा स्वदेशमा धेरै कमाउँदै ज्ञानेन्द्र - Kantipath.com
पन्ध्र वर्षभन्दा बढी समय रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा बिताउनु भएका ज्ञानेन्द्र चापागाई क्षेत्री अहिले भरतपुरमा आफ्नै व्यवसायमा रमाउनुभएको छ । भरतपुरमा कार सजावट र किनबेचको व्यवसाय गर्नुभएका उहाँ विदेशको भन्दा यहाँको कमाइमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० रिजाल चोकमा उहाँको कान्तिपुर कार डेकोर एण्ड ज्याकवास सेन्टर वीथ रिकण्डिसन रहेको छ । हरेक दिन बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म कामदार कर्मचारीसँगै उहाँ काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । मिलनचोकमा घर भएका ज्ञानेन्द्र स्नातक अध्ययनका क्रममा विदेशिनु भयो । विसं २०५७ मा मकाउ जानु भएका उहाँले चार वर्ष त्यहाँ बिताउनुभयो ।
मासिक एक लाख कमाइ हुने भए पनि चित्त नबुझेपछि उहाँ कोरिया पुग्नुभयो । सात वर्षको कोरिया बसाइमा मासिक रु.१ लाख ३० हजार हाराहारी कमाइ थियो । त्यसबाट उहाँ सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । त्यसपछि युएई पुग्नुभयो । त्यहाँ चार वर्ष ६ महिना बसाइ अन्यत्र जस्तै कमाइ भएपनि त्यहाँ छोडेर स्वदेश फर्किनु भयो ।
लगत्तै भरतपुर विमानस्थल नजिकै यो व्यवसाय शुरु गर्नुभयो । झण्डै रु.४० लाखको संरचना निर्माण गरी व्यवसाय थालेपनि विस्तार भएसँगै उहाँले फराकिलो ठाउँ खोज्नु भयो । यही क्रममा तीन वर्षपछि उहाँ रिजाल चोक आइपुग्नुभयो । दुई कठ्ठा जमिनमा संरचना निर्माण गरी कारको सजावट, सरसफाइ, पार्टस् बिक्री र पुराना कार किनबेचको व्यवसाय ज्ञानेन्द्रले गर्नुभएको छ ।
यो व्यवसायमा उहाँको लगानी झण्डै दुई करोड पुगिसकेको छ । क्याम्पस पढाउँदै गर्नुभएकी श्रीमती सुलोचना प्याकुरेल क्षेत्रीले पनि फुर्सदको समयमा व्यवसायमा साथ दिँदै आउनु भएको छ । दिउँसोको समयमा सुलोचनाले व्यवसाय हेर्नुहुन्छ भने उहाँ बजार प्रवद्र्धनमा जुट्नुहुन्छ । नौ जना कामदार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएर व्यवसाय गरिरहनु भएका उहाँले भन्नुभयो “मैले विदेशमा मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने सिकेको कुरा स्वदेशमा आएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छु ।”
दैनिक १४ घण्टा हाराहारी काममा खट्ने उहाँ शनिबारको दिन परिवारसँगै रमाउने गर्नुहुन्छ । कोरियामा जस्तै गरी सातामा एक पटक कामदार कर्मचारी सहित खानपान गराउने उहाँको प्रचलन रहेको छ । आम्दानी कस्तो छ ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “विदेशको भन्दा झण्डै दोब्बर यहाँ कमाउँछु । यसमा मेरो कडा मिहिनेत छ ।” अब विदेश जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो “अमेरिकाले भिसा पठायो भने पनि म जान्न ।”
ज्ञानुका नामले परिचित उहाँका अहिले भरतपुर क्षेत्रमा राम्रै सेवाग्राही छन् । मिजासिलो स्वभाव र मीठो बोलिका कारण सेवाग्राहीको मन जित्न सक्नु भएका उहाँको कर्म देखेर पनि धेरै प्रभावित हुने गरेका छन् । विदेश जान खुट्टा उचाल्नेहरुलाई स्वदेशमै श्रम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । File photo
Previous Previous post: कोभिडका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई ५० हजार दिने
Next Next post: वनकाली उद्यानमा गुर्जो रोपण
जवानहरुलाई अनुशासनको डण्डा : करोडौ भ्रष्ट्राचारका आरोपित कर्णेललाई छुट ?
जाली प्लाष्टिक म्याग्नेटिक कार्ड प्रयोग गरी एटिएमबाट पैसा निकाल्ने कार्यमा संलग्न पक्राउ
नेपाल टेलिभिजनमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
पूर्ण आयु जोगियो संसद : एमालेका यी ३४ सांसदले दिए ‘संजीवनी बुटी’ !
दार्चुला लटिनाथमा एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच झडप